Self Recovery ကို Pvc အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး China Manufacturers & Suppliers & Factory
Self Recovery ကို Pvc အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Self Recovery ကို Pvc အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ထုတ်ကုန်များ)
စက်မှုအလိုအလျှောက် PVC အထည်အလိပ်မြန်လှိမ့်တံခါး
စက်မှုအလိုအလျှောက် PVC အထည်အလိပ်မြန်လှိမ့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်မြန်မြန်လှိမ့်တံခါး
စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်မြန်မြန်လှိမ့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2 mm....
လျင်မြန်စွာအလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ် Fast တံခါး
မြန်မြန်အလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်အမြန်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2 mm. Function:insect...
Servo မော်တာနှင့်အတူ PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး
မြန်မြန်အလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2 mm. Function:insect...
မြန်ဆန်သောစက်မှု PVC အထည်အလိပ်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး
မြန်မြန်အလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး
Self Recovery ကို Pvc အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး self-Recovery ကို PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး roller Recovery ကိုအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး self-Repair အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး စက်ရုံ PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး သတ္တုအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး turbo အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ဂိုဒေါင်အမြန်နှုန်းတံခါး